Online Scam & Fraud - Ny Semalt Expert Know How To Minimize Exposure
Mitana toerana lehibe eo amin'ny fiainan'ny olona manerana izao tontolo izao ny vohikala. Tranonkala maro no manome votoaty sy vokatra tena izy. Na dia izany aza dia misy ihany koa ireo hafa izay tokony hitodika amin'ny mpampiasa aterineto ihany koa. Ny antony dia vokatry ny fisian'ny hosoka sy tram-barotra natao tamin'ny aterineto.
Oliver King, manam-pahaizana manerantany avy amin'ny Semalt , dia manome ireo olana izay afaka manampy amin'ny fanaovana hosoka sy tranganà aterineto.
Ny olana maoderina amin'ny Internet
Mitohy manova zavatra ny fomba fanandramana mpanadina amin'ny fampahalalam-baovao avy amin'ireo mpampiasa tsy mitandrina. Ity manaraka ity dia lisitr'ireo aterineto folo voalohany sy mailaka mailaka.
Ireo dia e-mail avy amin'ny Nizeriana iray izay milaza fa mandidy sy manantena lova ary mila fanampiana mba hahazoana izany.
2. Karatra fanomezan-dalana azo antoka na fanomezana
Manolotra antoka azo antoka ny carte de crédit sy ny trosa izy ireo. Mety hitodika ho azy ireo izy ireo satria misy orinasan'ny carte de crédit mandefa sazy.
Ireo no ahafahan'ny niharam-boina manohy mandresy lalao nefa tsy mandresy..
Ireto misy rohy ampiasaina hanodinana ireo mpampiasa any amin'ny tranonkala izay ezahan'izy ireo handresy lahatra azy ireo handray anjara amin'ny fampahalalana manokana amin'ny fampiasana tolotra mampihetsi-po.
5. Fanamboarana fanonerana
Anisan'izany ny fangalarana vola tsy nahazo alalana omena vola omena vola. Raha vantany vao tafapetraka tao amin'ny banky, dia nangataka ny fandanjalanjana miaraka amin'ilay singa ilay mpampihorohoro. Taty aoriana dia ny fampandrenesana ny fampindramam-bola tsy nekena.
Manome fahafahana hanao asa ny mpampihomehy ary mangataka ny antsipirian'ny banky amin'ny karama avy amin'ny komisiona. Manararaotra izany fotoana izany izy ireo mba hangalatra ny maha-izy azy ho an'ny hosoka misimisy kokoa.
7. Fanomezana sarobidy
Ireo tombontsoa ireo dia avy amin'ny toetra manetriketran'ny olona izay itateran'ny olona vola amin'ny fialam-boly tsy misy fisiana.
Mety ho toy ny maimaim-poana ny fitsangatsanganana an-dalamby, mba hahafantaran'izy ireo fa mazoto miasa izy ireo rehefa misoratra anarana sy tonga.
9. Ny rafitra Piramida
Ireo dia rafitra haingam-pandeha madinidinika miaraka amin'ny fanovana kely izay azon'ireo mpanadina amin'ny alàlan'ny mailaka.
10. Manamboara vola avy amin'ny fampiononan'ny trano
Tena indraindray ireny, saingy mety ho te-hanararaotra ny sasany amin'ny mpanamory sasany toy ny mandefa vola ho takalony amin'ny soso-tsakafo. Mety mandefa programa izay mihazakazaka fikandrana an-tsarimihetsika kokoa izay marefo kokoa amin'ny spammers.
Fanakalozan-drivotra sy trosan'ny onjam-peo
Ny hosoka dia midika ho filaminana, fampiasana ny maha-izy azy, na famoronana asa na vokatra tsy ara-dalàna..Ny olona dia angatahana mba hikaroka ny fisainana momba ny toe-javatra toy izany, satria misy fiantraikany amin'ny fiarovana azy ireo koa. Ny cybercrimine dia loza mitatao foana ary mety ho simba toy ny olona mihidy ao an-tokantrano. Ny vidim-piainana isam-batan'olona tsirairay dia niakatra hatramin'ny 50% avy amin'ny $ 197 amin'ny taona 2012 ho $ 298 amin'ny 2013 amin'ny fanafihana mitombo hatrany. Ny vidiny ho an'ny Etazonia dia $ 113 lavitrisa.
Miaiky ny sazy ara-bola an-tserasera
Ny karazana fivarotana an-tserasera amin'ny ankapobeny sy ny fitabatabana e-store dia tsy fandefasana, fandisoana, ary ny trangam-pandaminana (triangulation na mule). Ireo dia mitaky karama fandoavam-bola, ary tonga ny entana tsy misy olana. Tatỳ aoriana, nilaza ny manampahefana fa tsy ara-dalàna ny vola.
Ny endrika hafa dia ahitana:
Ny varotra mena sy ny vokatra hosoka
Shill mandidy an-tsolika izay ahitan'ireo tompon-trano miaraka amin'ireo mpiray tsikombakomba amin'ny toerany ny vidin'ny vidiny
Ny hosoka amin'ny sampandraharaha Escrow izay ahitana tranonkala sandoka
Ny vola sandoka sandoka
Lozam-pifamoivoizana sy fifankatiavana
Sarimihetsika an-tserasera, fifaninanana ary fifandonana
Lozam-pifamoivoizana sy fihokoana
Fanavotana amin'ny fampiasana mponina amerikanina
Mail Order Mailaka mpivady
Ny fampiasana ny maha-olombelona
Ny mpitsikilo sy ny mpitsikilo dia mahatakatra ny toetra maha-olona ary manararaotra izany amin'ny tombontsoan'izy ireo. Ny sasany amin'ireo trangan-javatra ampiasaina amin'ny olona amin'ny toe-javatra sarotra dia ahitana:
Fampandrenesana fandoavana vola
Ny hosoka amporisihina
famandrihana pharmacie amin'ny Internet
Ny hosoka hafa an-tserasera toy ny mekanika amin'ny asa, ny hosoka fampiasam-bola, ny alikan'ny Nizeriana, ny fiankinan-doha piramida, ny hosoka an-tserasera
Mpisera Internet na tanora kokoa
Na dia mety ho sahiran-tsaina sy indraindray aza ny fisafotofotoana amin'ny aterineto, dia tsy maintsy atao ny miaro ny olona rehetra amin'ny alàlan'ny fisalasalana, fisalasalana, ary fisalasalana foana izay toa tsy mahazatra. Mba hiarovana ny ankizy sy ny olon-dehibe, dia tsy tokony hatoky olona na iza na iza, hanakatona ny fampahalalam-baovao, hahafantatra hatrany, hiaro ireo fitaovana sy gadget rehetra, ary haka fotoana azo ampiharina.
Fahavoazana ara-tsosialy an-tserasera
Ny raharaham-barotra izay manao ny asany an-tserasera dia mety hampidi-doza ny fanaovana hosoka. Ny sasantsasany amin'ireo toro-hevitra mba hisorohana ny loza toy izany dia:
Miaro sy miaro ny fananana rehetra
Aza mifangaro amin'ny fandraharahana
Voafidy ny fotodrafitrasa IT
Manolora solosaina iray ho banky
Atao amin'ny toerana misy ny orinasa
Mitondra fanaraha-maso fototra momba ny mpiasa
Tena ilaina ny fandrakofana
Ny mpikambana dia afaka mampiasa ny Foibem-pirenena misahana ny hosoka, ny National Cyber ​​Security Alliance, ny Business Software Alliance, ary ny GetNetWise. Vao haingana ny FBI no niasa tao amin'ny Ivotoerana misahana ny heloka amin'ny Internet (IC3) Source .